AKHRISO: DF Soomaaliya oo si rasmi ah ugu dhawaaqday xariirka kala dhaxeeya Imaaraatka Carabta, Cadeysayna arrin aysan fileyn Taageerayaasha DF. – Puntlandtimes
AKHRISO: DF Soomaaliya oo si rasmi ah ugu dhawaaqday xariirka kala dhaxeeya Imaaraatka Carabta, Cadeysayna arrin aysan fileyn Taageerayaasha DF.
MUQDISHO(P-TIMES)- Wasaaradda Arrimaha dibada ee dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa soo saartay warsaxaafadeed deg deg ah oo ay si adag uga hadashay xariirka u dhaxeeya Soomaaliya & Imaaraatka Carabta, waxaana si gaar ah diiradda loo saaray arrimihii ugu dambeeyey ee soo baxay iyo sidda loogu baahan yahay in ay wax kala cadaadan.
Dawladda Faderaalku waxay cadeysay in uu yahay xariirka kala dhaxeeya Imaaraatka mid aan si fudud ku dhaawacmi –karin waxayna si rasmi ah u sheegtay in uu sii jiri doono waligiis oo aysan jirin wax dhibaato ah oo ku wajahan.
Nuqul qoraaleedka waxaa lagu cadeeyey in ay Soomaaliya abaal iyo taageero walaalnimo uga hayso Imaaraatka Tababarada, Taageerida iyo u gargaarida Shacabka Soomaaliyeed si ay uga baxaan dhibaatada dheer ee mudada ay ku jireen.
Qoraalka waxaa lagu sheegay in lacagtii laga xanibay Imaaraatka ay raaligalin ka bixisay dawladda Faderaalku, ayna xaqiiqsatay in ay u socotay ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed, ayna fasax tahay oo lagu wareejin doono dawladda Imaaraatka safaaradeda Muqdisho.
Dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in uu xariir wanaagsan oo dhinacyo badan kala dhaxeeyo Imaaratka Carabta oo aysan waligeed kala maarmi doonin oo ay taageero nooc kasta oo ay tahay ay ka sugayaan.